Ukwahlulwa komoya okuMncinci kunye noPhakathi, iChina kunye nokuPhakathi kokwahlulahlula abavelisi, abaXhasi, abaFektri - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
1. I-ASU eyayiyilwe ngenkqubo yoxinzelelo oluphantsi.
2. Ukuphelisa ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu kuyilo oluqhelekileyo.
3. Ngemigangatho yezempilo engqongqo, ukhuseleko, okusingqongileyo kunye nomgangatho (HSEQ).
4. Itekhnoloji yobuchwephesha kunye noyilo oluqinisekisiweyo lwemisebenzi ethembekileyo.
5. Ipotfoliyo yethu yenkonzo ibandakanya inkxaso eqhubekayo yokusebenza, uqeqesho lwabasebenzisi, ulondolozo kunye nokulungiswa, iinkonzo zezinto ezisecaleni, kunye nokulungiswa kwezityalo kunye neelemeshi.
Ukwahlulwa komoya okuhlangabezana nemigangatho ephezulu yomgangatho kulwelo okanye kwimveliso yegesi yeegesi zobuchwephesha kusetyenziswa inkqubo ye-cryogenic ngetreyi okanye iteknoloji yokupakisha.
inoluhlu lwe-ASP kunye nokutyalwa kunye nokutyalwa kwezityalo kunye nenkqubo esekwe kwi-sieve ye-adsorbing kubushushu obuqhelekileyo kunye nokwandiswa kokunyusa, ukwakhiwa kwenqaba yokufaka kuyasebenza kwaye iargon ikhutshwa ngokulungiswa ngokupheleleyo ngaphandle kwe-hydrogen kunye nenkqubo yangaphakathi yetekhnoloji.
I-SinoCleansky i-ASU encinci encinci, eyilelwe ngenkqubo yoxinzelelo olusezantsi, ishenxise ukungabinamandla okusetyenziswa kwamandla aphezulu kuyilo oluqhelekileyo.
Iimpawu eziphambili zobuchwephesha beemveliso zezityalo ezincinane neziphakathi zokwahlula umoya.
Njalo ngokokugqibela kuyilo lokupakisha kwisikhongozeli kunye nokuthumela ngolwandle.
isingqiniso email [imeyile ikhuselwe] ukufumana ingxelo yovavanyo oluninzi oluneenkcukacha.
1.Zithini izibonelelo zokwahlulwa komoya kweSinoCleansky? Ii-Pls zibonisa ngakumbi nge-ASU.
Ukuphelisa ukusetyenziswa kwamandla okuphezulu kuyilo oluqhelekileyo. Ukwahlukana komoya yinkqubo eqhelekileyo esetyenziselwa ukukhupha enye okanye zonke izinto eziphambili zomoya womoya. Izinto ezintathu eziphambili ziNitrogen (78.1%), iOxygen (20.9%) kunye neArgon (.9%). Iigesi ezisele ezisemoyeni zikwizixa ezilandelwayo kwaye ngesiqhelo azifumaneki. Kwiiyunithi ezahlulahlula umoya kakhulu (i-ASU) i-Neon, i-Xenon kunye ne-Krypton zifunyenwe zincinci. Ukwahlulwa komoya kweCryogenic kusebenzisa ukungafani kweendawo zokujija / ukubilisa kwamacandelo omoya ukwenza ukwahlulwa ngokuhluzwa kulwelo kumaqondo obushushu e-cryogenic. Kuba umoya ngumxube olula, ukucoca kunye nokucoca umoya kubonelela ngenkqubo yokwahlula ngempumelelo iNitrogen, ioksijini, kunye neArgon. Yonke i-ASU isebenzisa le nkqubo .;
Kuxinzelelo lweatmosferi izinto eziphambili ze umoya ube nezi ndawo zilandelayo zokujija / ukubila:
· Initrogen -320.4 ° F
· Ioksijini -297.3 ° F
· IArgon -302.5 ° F
Kuba umoya ngumxube olula, ukucoca kunye nokucoca umoya kubonelela ngenkqubo yokwahlula ngempumelelo iNitrogen, ioksijini, kunye neArgon. Yonke i-ASU isebenzisa le nkqubo .;
2.Ukuba ulungiselelwe isityalo sokwahlula umoya? Zeziphi izixhobo eziphambili kwi-ASU?
Ewe, iSinoCleansky ibonelela ngokwezifiso, ivelisa imveliso eyenziwe yenzelwe abasebenzisi kunye neemveliso ezintsha kwintengiso.
ICandelo leSiseko sokwaHlulwa koMoya (ASU)
Isinxibelelanisi somoya esiPhambili (i-MAC) I-MAC icinezela umoya osesibhakabhakeni, ngokubanzi ukuya kwi-60-90 PSIG kwaye uyihambise kwinkqubo. Ezi compressors zihlala ziqhutywa ziimoto zombane. Iicooler interstage zibonelelwa ukususa ubushushu bokucinezelwa phakathi kwenqanaba ngalinye lecompressor, apho kuhlala kukho 2-3.
Ukuphela kwangaphambi kokuCoca
Ii-ASU zale mihla zisebenzisa iYunithi yokulungiselela (i-PPU), esusa ukufuma, i-CO2 kunye neehydrocarbon ezininzi ezisemoyeni. Ukufuma kunye ne-CO2 kufuneka zisuswe ukunqanda umkhenkce kunye neqhwa elomileyo ekubeni lenze kamva kwinkqubo. I-PPU iqhele ukwenziwa yi-chiller ukupholisa umoya ukuya kwi-40-55F, isahluli esincinisayo ukususa amanzi simahla kunye neenqanawa ezi-2 zigcwaliswe ngezinto ze-desiccant kunye ne-mole sieve, ezithengisa ukungcola ngelixa zivumela umoya ukuba udlule. Ibhedi enye ihlala isemgceni wenkqubo, ngelixa enye ibhedi ihlaziywa ngenkunkuma eshushu yeNitrogen ukususa ukungcola okuqokelelweyo. Iibhedi ngokuzenzekelayo zitshintsha rhoqo emva kweeyure eziyi-5-8. Umoya ovela kwi-PPU usondele kakhulu kufume kwaye i-CO2 isimahla. Ezinye ii-ASU ezindala zisebenzisa ukuguqula ukutshintshiselana ngobushushu ukufezekisa isiphelo sangaphambili sokucoca. Ezi nkqubo ziqulathe ubushushu obukhethekileyo be-cryogenic obukhenkcezisa ukufuma kunye ne-CO2, evumela umoya ococekileyo ukuba uqukuqele kwinkqubo yokuhluza. Iipasile kwindawo yokufudumeza utshintsha yonke imizuzu emi-3 ukuya kweli-10 ngothotho lwebhabhathane kunye neevaluva zokujonga. Ukupasa okunye kususa ukungcola ngelixa elinye lihlaziywa ziigesi zenkunkuma eziphumayo. Nangona ukufuma kunye nokususwa kwe-CO2 ngokubuyisela umva kubanikezeli bobushushu kunezoqoqosho zombini kwiindleko ezinkulu kunye neendleko zokusebenza.
Ibhokisi ebandayo iqulethe i-cryogenic heaters, iikholamu ze-distillation kunye nezivalo ezihambelanayo kunye nemibhobho. Kuba iinxalenye zale nkqubo ziyabanda kakhulu, onke amacandelo afakwa ngaphakathi kwebhokisi ebandayo emva koko agqunywe kwi-insulation. Ii-Coldboxes zinokuba luxande okanye ziyindilinga kwaye zihlala zide, ezinye zingaphezulu kwama-200 'ngokuxhomekeke kubungakanani kunye nohlobo lwenkqubo yeArgon. Iibhokisi ezibandayo zale mihla zigcwele ukufakwa kwe-perlite, elula kwaye elula ukuyifaka nokususa, xa kukho imfuneko. Iibhokisi ezibandayo ezindala zinokupakishwa ngokuqinileyo nge-cryogenic rockwool, epakishwe ngesandla ukuya kwiipawundi ezili-14 ngeenyawo zenyawo nganye. Kuthatha ixesha elininzi ukufaka nokususa.
Zonke ii-ASU ngaphandle kwezinye iiyunithi ezincinci zinabandisi. Ukwandisa kubonelela ngesifriji esifunekayo ukuvelisa ulwelo kwinkqubo yekholamu yohluzi. Umoya, iNitrogen okanye iNkunkuma yeNitrogen yondliwa kwi-expander, ibangela ukuba ivili lijike kwaye lithumele amandla kwi-compressor, i-generator okanye kwi-brake yeoyile. Olu tshintsho lwamandla lubangela ukuba irhasi ipholile. Njengoko inkqubo iqhubeka, iqondo lobushushu elikhutshiweyo kude lifikelele kubushushu kuyilo ngelixa lupholisa inkqubo yekholamu.
Inkqubo yeArgon yeLwelo
Kukho iintlobo ezimbini ezixhaphakileyo zeenkqubo zeArgon. Izityalo ezininzi aziboneleli ngezixhobo zokwahlula iArgon kwaphela. Kule meko, uninzi lweArgon luphuma nje kwi-ASU ngerhasi yenkunkuma. Uhlobo lokuqala lusebenzisa ikholamu yeArgon ekrwada egxila kwiArgon ukuya kwi-2-2% kumxholo we-O3 ukusuka kwisondlo esivela kwikholamu yoxinzelelo oluphantsi lwe-2-88% O92. Le Argon ekrwada ifudunyezwa kwaye ixutywe ne-Hydrogen ngaphambi kokungena kwi-reactor ye-catalytic, apho i-H2 kunye ne-O2 zidibanisa ukwenza amanzi. Le Argon imanzi emva koko iyomiswa iphinde ipholile ipholile kubushushu be-cryogenic emva koko i-H2 kunye ne-N2 zisuswe zisahlulahlulo kunye nekholamu yolwelo, ngokwahlukeneyo. Iinkqubo zeCryogenic Argon zixhomekeke kuphela kululwelo lokucoca. Kuba kuthatha inani elikhulu leetreyi okanye ukupakisha ukwahlula iArgon kwioksijini, ezi kholamu zinokuba ngaphezulu kweenyawo ezingama-2 ubude. Uninzi lwezityalo ezitsha zisebenzisa iinkqubo ze-cryogenic Argon ukunqanda ukusebenzisa icompressor yeArgon kunye neHydrogen kule nkqubo. Icala elisecaleni lixesha elide lokufumana ukufezekisa ubunyulu emva kokuqalisa okanye ukuphazamisa inkqubo, amaxesha amaninzi ngaphezulu kweeyure ezingama-200.
Kuthekani malunga nesicelo kunye neziphumo zokwahlukana komoya?
Ukwahlulwa komoya okuphakathi naphakathi kweoksijini, i-nitrogen kunye ne-argon.
Yonke imveliso enegesi
Kwisiza sabavelisi begesi lolona hlobo luqhelekileyo lwe-ASU. Ezi zityalo zingavelisa i-Oxygen kuphela, i-Oxygen ne-Nitrogen okanye i-Oxygen, i-Nitrogen kunye ne-Argon okanye i-Nitrogen nje. Kuzo zonke iimeko iigesi ezingacociswanga ngokupheleleyo zisetyenziselwa ifriji kwaye zikhuphele emoyeni. Ezi yunithi zahlulahlula umoya kwifom engamanzi, kodwa zisebenzisa ifriji kulwelo ngaphambi kokuba ziphume kwibhokisi ebandayo. Iimveliso zivela kwibhokisi ebandayo kuxinzelelo olusezantsi kunye nakubushushu obungqonge IiCompressors zeemveliso zisetyenziselwa ukwandisa iimveliso kwiimfuno zentloko ezifunekayo. Kwezinye iinkqubo, iimveliso ezingamanzi zitshizwa ngesitshisi esikhulu sokufudumeza apho zifudunyezwa kubushushu obufanelekileyo kuxinzelelo olufunekayo. Abavelisi begesi bavelisa phakathi kwe-10-2000 iitoni ezimfutshane zemveliso edibeneyo.
Yonke iMveliso yoTywala
Oku kuhlala kuthathwa njengesityalo somrhwebi. Yonke imveliso oyifunayo inyibilikisiwe ukuze ithunyelwe kwiinqwelwana ezothutha i-cryogenic okanye iimoto zikaloliwe. Ngokubanzi, ezi yunithi zenza i-Oxygen engamanzi (i-LOX), i-Nitrogen engamanzi (i-LIN) kunye ne-Argon engamanzi (i-LAR), nangona kwezinye iindawo zemveliso yeoyile / yegesi kukho ulwelo olukhulu lweNitrogen kuphela ii-ASUs. Ezi mveliso zihanjiswa kwiitanki zekryogenic kwindawo yabasebenzisi, apho kushushu khona kubuyiselwa kwigesi ngaphambi kokuba isetyenziswe okanye isetyenziswe njengamanzi. Ngokwesiqhelo abasebenzisi ekuphela kwabo abasebenzisa iimveliso ezingamanzi ziifriji zokutya, iinkampani zenkonzo yeoyile okanye ezinye iinkqubo ezifuna amaqondo obushushu abanda kakhulu. Izityalo ezilulwelo zilinganiselwe ukuvelisa ukusuka kwi-150 ukuya kwi-1000 iitoni ezimfutshane ngemini yokudityaniswa kwemveliso. Ezi ASU zinecandelo elongezelelekileyo lezixhobo ezibizwa ngokuba yiNitrogen Liquefaction Unit (NLU) ukubonelela ngefriji eyimfuneko yokunyibilikisa zonke iimveliso. I-NLU ngokubanzi ngowona msebenzisi mkhulu wamandla ngokude kwi-ASU.
Ulwelo oluhlanganisiweyo kunye neMveliso yeGesi
Ngokuqhelekileyo zibizwa ngokuba "zizityalo ze piggyback," ezi ASU zivelisa ikakhulu imveliso yegesi yokusetyenziswa kwemibhobho, kodwa zineeNLU zokuvelisa iimveliso ezingamanzi ezithunyelwa ngaphandle kwesiza. Izityalo ze piggyback ubukhulu becala zikhulu ukusuka kwi-300 ukuya kwi-1000 iitoni ezimfutshane ezidibeneyo.
Ngolwazi oluthe kratya, qhagamshelana noSinoCleansky namhlanje
Kuthekani ngenkqubo yezixhobo zentengiso ezixineneyo?
Izityalo ze-PSA zisekwe kwinkqubo ethembekileyo, eguqukayo kunye nengxaki yokungabinangxaki yokutsala i-adsorption (VPSA).
Zithini izibonelelo zesityalo se-nitrogen ephezulu?
Ngelixa inkqubo yokwanda kwe-backflow inezinto zoxinzelelo oluphezulu lweemveliso ze-nitrogen ngaphandle kwenqaba ngaphandle kwempembelelo kubunyulu, kunye notyalo-mali oluncinci lwexesha elinye lwezixhobo ezipheleleyo.